Izindatshana zikaZara Ziad zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge UZara Ziad
Ikhwalithi yedatha ephansi iwukukhathazeka okukhulayo kubaholi bamabhizinisi abaningi njengoba behluleka ukuhlangabezana nezinhloso zabo ezihlosiwe. Ithimba labahlaziyi bedatha - okumele bakhiqize imininingwane ethembekile yedatha - bachitha u-80% wesikhathi sabo behlanza futhi belungiselela idatha, futhi kuphela i-20% yesikhathi esisele ukwenza ukuhlaziya kwangempela. Lokhu kunomthelela omkhulu ekukhiqizeni kweqembu njengoba kufanele baqinisekise mathupha ikhwalithi yedatha ye
Inani elikhulu labakhangisi be-B2B - cishe u-27% - liyavuma ukuthi idatha enganele ibalahlekisele ngo-10%, noma kwezinye izimo, ngisho nangaphezulu ekulahlekelweni kwemali engenayo yonyaka. Lokhu kugqamisa ngokusobala inkinga ebalulekile abadayisi abaningi ababhekene nayo namuhla, okungukuthi: ikhwalithi yedatha ephansi. Idatha engaphelele, engekho, noma enekhwalithi embi ingaba nomthelela omkhulu empumelelweni yezinqubo zakho zokumaketha. Lokhu kwenzeka kusukela cishe kuzo zonke izinqubo zomnyango enkampanini - kodwa ikakhulukazi ukuthengisa
Amandla Edatha: Izinhlangano Eziholayo Ziyisebenzisa Kanjani Idatha Njengenzuzo Yokuncintisana
NgoLwesibili, Novemba 16, 2021 NgoLwesibili, Novemba 16, 2021 UZara Ziad
Idatha ingumthombo wamanje nowesikhathi esizayo wenzuzo yokuncintisana. Borja Gonzáles del Regueral – Vice Dean, IE University’s School of Human Sciences and Technology Abaholi bebhizinisi bakuqonda ngokuphelele ukubaluleka kwedatha njengempahla eyisisekelo yokukhula kwebhizinisi labo. Nakuba abaningi sebekubonile ukubaluleka kwayo, iningi labo lisadonsa kanzima ukuqonda ukuthi lingasetshenziswa kanjani ukuze kutholakale imiphumela ethuthukisiwe yebhizinisi, njengokuguqula amathuba engeziwe abe ngamakhasimende, ukuthuthukisa isithunzi somkhiqizo, noma